“စိတ်ဆိုးနေတဲ့ သူမကို ချော့တဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်” - Cele Connections
“စိတ်ဆိုးနေတဲ့ သူမကို ချော့တဲ့ ချစ်သူကြောင့် ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
ကျရာ ဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိင်တဲ့ မင်းသမီးချော ခိုင်နှင်းဝေကိုတော့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော်..။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အများအကျိုးအတွက်ကိုလည်း သူမတတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ခိုင်နှင်းဝေဟာ သားသမီး အယောက် (၃၀)ကို သူမရဲ့ ဝင်ငွေနဲ့ရော အလှူရှင်များရဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေနဲ့အတူ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ေ ပးနေတာပါ..။
သူမရဲ့ အချစ်ရေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေရှေ့ကို တရားဝင်ချပြကာ ပျော်ရွှင်စွာ နေထိုင်ရင်း ချစ်သူနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပ်တွေကို တက်ညီလက်ညီ လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ..။ သမီးဖြစ်သူကို ရွှန်းရွှန်းလေးနဲ့တည့်တဲ့ ချစ်သူရဲ့ ကြင်နာမှုတွေနဲ့ သူမကို တန်ဖိုးထားလို့ သူမချစ်သူရဲ့ အချစ်တွေကို တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးမိတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရင်ဖွင့်တင်လာခဲ့ဖူးပါတယ်..။ ချစ်သူနဲ့အတူ အမြဲ ချစ်ကြည်နူးစွာ နေတဲ့အချိန်ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အမှတ်တရလေးတွေကို ဖန်တီးလေ့ရှိသူ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သူမချစ်သူနဲ့အတူ ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို သူမရဲ့ Tik Tok အကောင့်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်..။
Tik Tok လေးထဲမှာ စိတ်ကောက်နေတဲ့ သူမကို အနမ်းပေးကာ ချော့တဲ့ ချစ်သူနဲ့အတူ ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး..။ ချစ်သူရှေ့မှာ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို စိတ်ကောက်ကာ ချစ်ဖို့ကောင်းနေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေနဲ့ ချစ်သူတို့ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုိဖိုင်လေးကို Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။.
Source: Khine Hnin Wai’s Tik Tok Account
“စိတျဆိုးနတေဲ့ သူမကို ခြော့တဲ့ ခဈြသူကွောငျ့ ပြျောရှငျမဆုံးဖွဈနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ”
ကရြာ ဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိငျတဲ့ မငျးသမီးခြော ခိုငျနှငျးဝကေိုတော့ Cele Connections ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော..။ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားပွီး အမြားအကြိုးအတှကျကိုလညျး သူမတတျနိုငျသလောကျ ပါဝငျလုပျဆောငျပေးတတျတဲ့သူပဲဖွဈပါတယျ..။ ခိုငျနှငျးဝဟော သားသမီး အယောကျ (၃၀)ကို သူမရဲ့ ဝငျငှနေဲ့ရော အလှူရှငျမြားရဲ့ လှူဒါနျးမှုတှနေဲ့အတူ ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျပေးနတောပါ..။
သူမရဲ့ အခဈြရေးကိုလညျး ပရိသတျတှရှေကေို့ တရားဝငျခပြွကာ ပြျောရှငျစှာ နထေိုငျရငျး ခဈြသူနဲ့အတူ ပရဟိတအလုပျတှကေို တကျညီလကျညီ လုပျဆောငျနကွေတာပါ..။ သမီးဖွဈသူကို ရှနျးရှနျးလေးနဲ့တညျ့တဲ့ ခဈြသူရဲ့ ကွငျနာမှုတှနေဲ့ သူမကို တနျဖိုးထားလို့ သူမခဈြသူရဲ့ အခဈြတှကေို တနျဖိုးထားမွတျနိုးမိတဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ ရငျဖှငျ့တငျလာခဲ့ဖူးပါတယျ..။ ခဈြသူနဲ့အတူ အမွဲ ခဈြကွညျနူးစှာ နတေဲ့အခြိနျပုံရိပျလေးတှနေဲ့ အမှတျတရလေးတှကေို ဖနျတီးလရှေိ့သူ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သူမခဈြသူနဲ့အတူ ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးကို သူမရဲ့ Tik Tok အကောငျ့မှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ..။
Tik Tok လေးထဲမှာ စိတျကောကျနတေဲ့ သူမကို အနမျးပေးကာ ခြော့တဲ့ ခဈြသူနဲ့အတူ ဆော့ထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး..။ ခဈြသူရှမှေ့ာ ကလေးလေးတဈယောကျလို စိတျကောကျကာ ခဈြဖို့ကောငျးနတေဲ့ ခိုငျနှငျးဝနေဲ့ ခဈြသူတို့ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝေ ပေးလိုကျပါတယျနျော..။.
“တွဲဖော်တွဲဖက်သရဲကြီးလေးကောင်ထဲကမှ ကိုကုသိုလ်နဲ့ ကိုကင်းကောင်တို့ကို သတိရမဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ လွင်မိုး”
“ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူ လစဉ် မီတာအလှူတော် နှင့် နဝကမ္မ ၁ သိန်းကျပ်တိတိကို နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း လှူဒါန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ နေဒွေး”
အနုပညာလောကထဲကြင်လည်ခဲ့တာ (၁၇)နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမယ့် နောက်တက်မင်းသားတွေလောက်တောင်နေရာပေးမခံရတဲ့ စည်သူမောင်
” အိမျ့ခဈြရဲ့Weding photo ရိုကျနတောကိုမွငျပွီး အားကနြတေယျဆိုတဲ့ ပိုပို “